Rakhine ram cu AA ralkap nih uknak phunthum In nawlngeihatimh cang - Chin Eleven News
August 2, 2021 Lianchin Thang Myanmar 0
Rakhaing ram cu AA / ULA nih, uknak, Biaceihnak, Upadi sernak nawlngeihnak (3) he an ram sersiam hram an thawk cang; AA Hruaitu Htun Myat Naingarak chimchung tawn ning tein, AA nih Ralhrang min Aung Hlaing ralkap pawl an ram inathawlh hna hnu in .
Ran Khaing ram sianginn ah an mah Rakhaing ram hla ( Rakhaing National Song ) an sak ter cang hna. Arakan Army (AA) thazangathawng chin lengmang cang caah, an mah Rakhaing ram hunhimnak laktu dingin Rakhaing palek Serhram an thawkthan,atu ah cun upadi sertu sini pawl an mah tein an i ngeih than cang hna caah ULA/ AA thithruainak in biaceih zungah report tuah taza i cuai khawhasi cang tiah August 1 ithawk in Rakhaing mipi sin cathanh an chuah cang .
Taza i cuai khawh dingin an (case ) sining vialte fawi tein kuat khawhnak ding in email, telegrams le VK hna zawng an mipi sin ah an thanh chih dih. Taza cuai tik ah thilacannak hmunhma, ni le thla le caan, um nak address vialte fiang tein langhter dingin an mipi sin forhfial nak an tuah chih hna. Report tuah (case) konglam vialte hiaho sin hmanh ah theihter lo ding in mipi sin ah biakam nak an tuah chih fawn hna.
Kawlca in relchap >>>>> ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကအမှုအခင်းတွေကို တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း ULA/AA ထုတ်ပြန်; ဩဂုတ် ၂ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက အမှုအခင်းတွေကိုတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း ULA/AA က ဩဂုတ် ၁ ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ မတရားခံရမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ခိုးမှု၊ မြေယာပြဿနာ အစရှိတဲ့အမှုအခင်းတွေအပြင် တရားဉပဒေအဆုံးအဖြတ်ခံယူရမယ့် အမှုအခင်းတွေအားလုံးကို ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ တရားရေးဌာနကိုတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ ကြေညာလိုက်တာပါ။
တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ email, telegram, vk အကောင့်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပြီး တိုင်တန်းသူဟာ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံနဲ့ ဖုန်းနံပတ်ကိုလည်း အတိအကျဖော်ပြရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထို့အပြင် အခင်းဖြစ်တဲ့ နေရာ၊ အချိန်၊ နေ့ရက်နဲ့ အဖြစ်အပျက်တိကျစွာဖော်ပြထားတဲ့ တိုင်ကြားစာကို ကျူးလွန်ခံရသူဖြစ်စေ၊ ဆွေမျိုး၊ မိသားစုဝင်တစ်ဦးကဖြစ်စေ၊ မျက်မြင်သက်သေကဖြစ်စေ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း ULA/AA ကဆိုပါတယ်။
တိုင်ကြားမှု၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်စဉ်ပြီးမြောက်သည်အထိ တိုင်တန်းသူရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မျှမသိအောင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးမယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ULA/AA) အနေနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မတိုင်ခင်ကတည်းက တချို့ကျေးရွာတွေမှာ မှုခင်းတိုင်ကြားချက်တွေရရှိဖူးသလို ဖြေရှင်းပေးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းအမြစ်တွေကပြောပါတယ်။
Breaking News; A mak hih! Myanmar National Defense Force an dirh,